Home Wararka (Fadeexo) Marwada Farmaajo oo lacagihii dhismaha Cusbitaalada Haweenka ku tagrifashay
(Fadeexo) Marwada Farmaajo oo lacagihii dhismaha Cusbitaalada Haweenka ku tagrifashay
Mudo ku dhaw sanad ayaa xaaska Madaxweyne Farmaajo waxa ay ku qabatay magalaada Muqadisho shir jaraa’id iyada oo shirkaas ku sheegtay in ay sameeystay urur u gaar ah iyada oo ka shaqeeyn doono arimaha Caafimaadka Haweenka iyo Dhalaanka, kaas oo loogu magacdaray “Saynab Moalim Foudnation”.
Marwa Seynab Macalim oo isticmalaysa magaca umadda Soomaaliyeed ayaa magaca Hay’adaan waxaa dhaqaale lagu waydiistay wadamo badan. MOL ayaa heshay nuqul ka mida qoraladaan, wadamada iyo hay’adaha lacagta la waydiistay ayaa waxa ka mida; Sacuudiga, Qatar, Turkiga, Canada, Sweden, China, EU, Koonfurta Kuuriya, Ford Foundations, UNICEF, Kuwait Fund for Arab Economic Development iyo UNIFEM.
Marwada aya safaro kala duwan ku bixisay qaar ka mida wadamadaas iyada oo aad isugu mashquulisay in ay ka soo ururuso dalalkaas aduun ay ku sheegtay $23 Milyan oo lacagta Maraykanka ah. Ka dib markii wadamada qaar ay ogolaadeen oo ay aqbaleen in ay caawiyaan mashruuca ay Marwada Madaxweynaha wadato, ayaa Marwada awaxa lagu qasbay in ay sameeysato Koontooyin lacagaha loogu soo shubo.
Si lacgataas si toos ah ugu soo dhacado Koontooyinka ayaa waxa koontooyin gaar ah laga furay bangiyo ku yaalo dalka dibaadiisa, gaar ahaan Bangiga loo yaqaano Türkiye Kalkınma Bankası, dhanka Soomaaliya waxaa laga furay Koontooyin dhowr Bangi oo xaruumo ku leh magalaada Muqdishu.
Dhanka kale waxaa iyagana warqado taageero ah laga soo qoray Wasaaradda Arimaha Dibadda iyo Wasaaradda Maaliyadda kuwaas oo ku sheegay qoraaladooda in si buuxda loo taageero mushruuca ay wadato Marwada Madaxweynaha. Waxaa warqad qaasa ah qoray Agaasimaha Xafiiska Madaxweynaha Nuur Diiriye Fuursade oo qabo gabadh la dhalatay Zeynab Macalim.
Safarada ay lacagaha yabooha ku soo qaadatay Marwa Seynab Macalim waxaa qayb ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska Madaxweynaha dowlada Fedaraalka Soomaaliya, Farmaajo.
Marwada Madaxweynaha oo horay u balan qaaday in ay dalka ka dhisayso in ka badan 200 xaruumood oo lagu xanaaneynayo Dhalaanka iyo Haweenka ee loo yaqaano MCH ayaa ilaa iyo hadda aan laga dhisin mid qura dalka.
Waxaa dad badan is weyndiinayaan halkeey ku danbeeysay lacagihii lagu soo qaaday magaca shacabka Soomaaliyeed? Yaa maamula Koontooyinka lacagahaas ku jirto?
Sida MOL loo xaqiijiyay lacagaha waxaa intooda badan lagu soo hagaajiyaa Gabadha lagu
magacaabo Nasro Wehliye oo horay uga tirsanaan jirtay shirkada Taleefanada ee Nationlink. Nasro ayaa si gaar ah loogu wareejiyay in ay u maamusho lacagahaas iyo Koontooyinka lagu wareejinayo.
Waxaa caado u ahaan jirtay hogaanka dalka ka jira in in xiliga kala guurka ah ee dowlada waqtigeedu yahay gabaabsi in magaca dowlada lagu dhaco dhaqaalhaa dalka. Si looga hortago in aan hantida dalka la dhicin ama magaca dalka aan lagu been abuuranin , waxaa lama huraan ah in Hanti dhowrka Guud ee Qaranka, baarintaan deg deg sameeyo si looga hortago dhaca hantida lagu soo qaaday magaca umadda Soomaaliyeed. MOL ayaa waxa ay dhawaan soo bandhigi doontaa dokumenti iyo cadeeymo lacagaha lagu soo qaaday magaca “Saynab Moalim Foudnation”.